राति १२ बजे राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई ढोका खोल्दिनु भो! : रामहरी खतिवडा - falaichanews
इटहरी । नेपाली कांग्रेसका प्रभावसाली नेता रामहरी खतिवडाले मुलुकमा लोकतन्त्रमाथि खतरा पैदा भएकाले विपक्षी गठबन्धन एकजुट बनेको बताएका छन् । सोमबार प्रेस युनियन सुनसरीले इटहरीमा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा उनले पहिले पनि परिवर्तनको विपक्षमा रहेको प्रवृत्तिलाई परास्त गर्न गठबन्धन बनेको उल्लेख गरे ।
उनले जनताले कम्युनिष्टलाई दिएको करिव दुइ तिहाई मतको केपी ओली प्रवृत्तिले अपमान गरेको बताए । ‘पूर्व पश्चिम रेल, पानीजहाज, केवलकार कस्ता कस्ता थिए भाषण, उनले भने, अहिले ६ महिनामा २ पटक सनकका भरमा संविधान विपरित प्रतिनिधिसभा भंग गर्नु परेको छ ।’
खतिवडाले अब केही दिनमा दोश्रो प्रतिगमन पनि सर्वोच्चले सच्याउने भन्दै पाटी सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने आदेश आउनेमा विश्वस्त रहेको बताए । संचारकर्मीको एमाले मिल्यो भने त, शेरवहादुर देउवा कसरी प्रधानमन्त्री वन्नु होला त ? भन्ने प्रश्नमा उनले, माधव नेपाल हामी सबै संविधानको रक्षाका लागि एकजुट भएका छौं, त्यसो भएको हुनाले यस्तो कुरा हुनै नसक्ने जिकीर गरे ।
उनले दोश्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटनमा राष्ट्रपतिको भूमिका पनि अचम्मको भएको संकेत गरेका छन् । ‘राष्ट्रपति जी पनि कस्तो खै, राति १२ बजे प्रधानमन्त्री ढोका ढक्ढक्याउन जानूहुन्छ । उहाँ ढोका खोल्दिनुन्छ ।’ संविधानको पालना गर्ने संस्था पनि प्रतिगमनको साक्षी बनेको खतिवडाको संकेत थियो ।